अत्यन्त विलासी जीवनशैली भएकी महिलामाथि लाग्यो १७ आरोप
२०७५ असोज १९ शुक्रबार, क्वालालमपुर । विश्वमै अत्यन्त विलासी जीवनशैली भएकी महिलाको रुपमा चिनिएकी मलेसियाका एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीकी श्रीमतीलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । पुर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाककी श्रीमती रोस्मा मनसुरलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धी निकायले १७ ओेटा आरोप लगाएको हो । ... बाँकी अंश»
अमेरिका र रुसको विवादपछि धर्तीमा फर्किए आईएसएसका वैज्ञानिकहरु
२०७५ असोज १९ शुक्रबार, काठमाडौं । दुई अमेरिकी वैज्ञानिक तथा एक रुसी वैज्ञानिक विहीबार छ महिनाको अवधि पूरा गर्दै पृथ्वीमा फर्किएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज १९ शुक्रबार, काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारत भ्रमणको क्रममा छन् । शुक्रबार दोस्रो दिनको भ्रमणको क्रममा भारतसँग केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुनसक्ने बताइएको छ । ... बाँकी अंश»
वंगलादेशमा आरक्षण खारेज : आरक्षण अभिसाप नै बनेको हो ?
२०७५ असोज १८ बिहिबार, नयाँ दिल्ली । लामो समयसम्म चर्किएको विवादकोबीच वंगलादेशले अन्ततः आरक्षण व्यवस्था खारेज गरेको छ । विशेषगरी स्वतन्तता ... बाँकी अंश»
भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य २ रुपैया ५० पैसाले घट्यो
२०७५ असोज १८ बिहिबार, नयाँदिल्ली। भारत सरकारले बिहीबार पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाएको छ। पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर भारतीय २ रुपैया ५० पैसा घटाएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज १८ बिहिबार, ओटावा, क्यानाडा। रूसी साइबर आक्रमणबाट क्यानडासमेत प्रभावित भएको बताइएको छ। बिहीबार क्यानाडेली विदेशमन्त्रालयले आफ्नो खेलकूदको अनुशासन केन्द्र र मन्ट्रिअलस्थित अन्तराष्ट्रिय डोपिङ एजेन्सीमाथि रूसद्वारा घात गरिएको बताएको छ। ... बाँकी अंश»
अमेरिका विना साउदी राजा २ साता पनि टिक्दैनन् : ट्रम्प
२०७५ असोज १८ बिहिबार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरेबियाको राजा अमेरिकाको सहयोग विना २ साता पनि नटिक्ने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
पुटिन भारतमा, अमेरिकाले दियो प्रतिवन्धको चेतावनी
२०७५ असोज १८ बिहिबार, काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारत आउँदैछन् । बिहीबार दुई दिने भ्रमणका लागि भारत आउँदै गर्दा अमेरिकाले भने भारतलाई चेतावनी दिइसकेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज १७ बुधबार, जकार्ता । इन्डोनेसियाको सुलावेसी द्वीपमा गत शुक्रबार गएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछि आएको सुनामीमा परी मृत्युहुने व्यक्तिको सङ्ख्या एक हजार ४०० पुगेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज १७ बुधबार, वासिङ्टन । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ आउँदो आइतबार उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्ने भएका छन्। भ्रमणका क्रममा उनले उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनसँग भेटघाट गर्नेछन् । ... बाँकी अंश»
ट्रम्पमाथि कर छलीको आरोप
२०७५ असोज १७ बुधबार, काठमाडौं । अमेरिकाको प्रमुख समाचारपत्र न्युयोर्क टाइम्सले डोनाल्ड ट्रम्पले कर छली गरेको आरोप लगाएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज १७ बुधबार, स्टकहोम । लेजर फिजिक्सको क्षेत्रमा गरिएका आविष्कारका लागि एक महिलासहित तीन वैज्ञानिकलाई भौतिकशास्त्रतर्फ सन् २०१८ को नोबेल पुरस्कार दिइएको छ । ... बाँकी अंश»
आइएसले ‘कडा कारबाही’ को सामना गर्नुपर्ने
२०७५ असोज १७ बुधबार, पेरिस । स्लामिक स्टेट (आइएस) जिहादी समूहले अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको सिरियामा हुने कारबाहीमा कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अमेरिकी रक्षामन्त्री जिम म्याटिसले मङ्गलबार बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
निर्वाचनअघि माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिको खातामा कहाँबाट आयो १५ लाख डलर ?
२०७५ असोज १७ बुधबार, काठमाडौं। माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले निर्वाचनभन्दा पहिला १५ लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम पाएको खुलेको छ । माल्दिभ्सको आधिकारिक वित्तीय संस्थाले प्रहरीलाई यस्तो जानकारी दिएको हो । सेप्टेम्बर २३ मा भएको निर्वाचनमा पराजित भएका यामिनले निर्वाचनभन्दा पहिला दुई निजी बैंकहरुबाट सो रकम पाएको विवरणमा देखिएको छ। ... बाँकी अंश»
इन्डोनेसियामा भूकम्प र सुनामीमा परी ज्यान जानेको सङ्ख्या १२३४ पुग्यो
२०७५ असोज १६ मंगलबार, जाकर्ता । इन्डोनेसियाको सुलावेसी द्वीपमा गत शुक्रबार गएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछि आएको सुनामीमा परी मृत्युहुने व्यक्तिको सङ्ख्या १२३४ पुगेको छ । ... बाँकी अंश»
उत्तर कोरियासँग २० देखि ६० न्युक्लियर हतियार छ : दक्षिण कोरिया
२०७५ असोज १६ मंगलबार, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियासँग ६० न्युक्लियर हतियार रहनसक्ने बताएको छ । दक्षिण कोरियाका एक मन्त्री चो म्योङ ग्योङले संसदमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
वातावरणको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै अमेरिका-क्यानाडा सम्झौताको विरोध
२०७५ असोज १६ मंगलबार, मन्ट्रियल । वातावरणका क्षेत्रमा क्रियाशील ग्रीनपिस र सिएरा क्लबलगायतका संस्थाहरुले अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा व्यापार सम्झौता (युएसएमसीए) मा वातावरणीय मुद्दाहरुमा कमजोर प्रावधान राखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
चीनको ऋणबाट पाकिस्तान सशंकित, ‘सिल्क रोड’ योजनामा २ अर्ब डलरको कटौती
२०७५ असोज १६ मंगलबार, काठमाडौं । पाकिस्तानको कराँचीदेखि पेशावरसम्म जोड्ने रेलको योजना चीनको सबैभन्दा ठुलो ‘बेल्ट एण्ड रोड’ योजनाको एक हो । यद्यपि यो योजनामा पाकिस्तानको उत्साहमा पछिल्लो समय केही कमी आएको छ । ... बाँकी अंश»
जेलबाट भागे १२०० कैदी
२०७५ असोज १६ मंगलबार, काठमाडौं । इन्डोनेसियाका १२०० कैदीहरु जेलबाट फरार भएका छन् । ... बाँकी अंश»
नाइट क्लबमा विष्फोट, कम्तीमा १० को मृत्यु
२०७५ असोज १६ मंगलबार, काठमाडौं । दक्षिण सुडानको पश्चिमी यम्बाओ सहरमा रहेको एक नाइट क्लबमा भएको विष्फोटमा परी कम्तीमा १० जना मानिसहरुको ज्यान गएको छ भने एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । ... बाँकी अंश»